SHACABKA SOMALILAND UFF AYUU YIDHI DAGAAL, DAYMADA XAMAR-NA HADALKEEDAA TUUR »
NIN KABIHIISA AAD TOLAYSO , KAFATANTAADA TOLAAYA, ALLOW ADAAN KA MAGAN GALNAY..
Dhamaan bahweynta daadahaysa websitekan iyo dadweynaha sharafta leh ee la socda wararka iyo maqaalada ku so baxa websitekan si gaara ayay u salaaman yihin.
Waxa aynu nahay qaran jiraa, lacag inoo gaara ayaynu leenahay, calan ino gaara ayaynu leenahay, golayaashi qaran wax inaga maqan ma jiran . wallow caalamka wali aynan ka helin aqoonsi caalami ah, ilahaybana taas qacantiisa ku jirta oo aynu waydisanayna.
Hadaba xukumadeena ayaa inta badan waxay siyaasadeeda arimaha debada ku salaysa aqoonsi raadis ayaanu idinku maqanay, itaal meel u dhigaba wufuudbay debadaha u dirtaa. Bilahan u danbeeyey ayaa waxa si xoog ah ay xukuumada riyaale safaro ugu kala bixisay wadanka yare ee jabouti, safaradaas wufuuda kala duwan ee hogaamanisay ayaa ka koobna heer madaxweyne ilaa heer wasiir iyo barlamaanba , gudashada waajibaadkooda wufuudaas ka dib , ayaa markay wadanka ku so noqdaan waxay shacabka dhegaha ugu ridan jabouti waa dal walaalaheena, arimo badan ayaanu kala so hadalnay oo ay ka mid yihin:- dhinacyada siyaasadda, ammaanka iyo ganacsiga. Ilaahaybaan og waxa lagu wada hadlay. Sido kale waxa iyana xusid mudan in maalmahan u danbeeyey xaflado ay UDUB dabada ka riixayso oo lagu taageerayo ina geelaha jabouti lagu qabtay magaaalooyinka waaweeyn ee dalka. Iyado waliba TVga qaranka ee ninka muwaadinka ah ee xisbiyada mucaaradka ah ka tirsan laga xaarantimeeyey in laga so daayo hadalkiisa ama xafladiisa ayaa si weyn looga so daayay Tvgii qaranka ee umadu lahayd xafladaas jabouti lagu xusayo.
Wadanka aynu sida u ilaalinayno danahiiisa gaarka ah ayaa waxa so if baxday in isaguna kafanteena tulaayo, oo aan xukuumada jabouti haba yaraate raali ka ahayn in Somaliland guul gaadho, waana la ogyay oo cidna manta lo sheegi mayo, ninki is diidsiiyana yeelkiis.
Taas waxa u daliil ah xaflad lagu xusi lahaa maalinta qaranimada Somaliland ee shacabka reer Somaliland ee ku dhaqan jabouti damceen inay u dabaal degaan, in si cad uu wasiirka arimaha gudaha ee jabouti isku hor taagay, isagoo waliba carabaabay in Somaliland oo aan aqoonsi haysan laga xusi karin wadankiisa,Sidaasna lagu joojiyay xafladii.
Walaaltinada iyo wanaaga inaga iyo jabouti inaga dhaxeeyaa, ma ii danee oo ii hiili kuu daneyn mayo kuuna hiilin maaaya .cajab!
Madaxweyne riyaaale been kama sheegin oo jabouti isaga wa walaalihi waana saaxiibadii, xoolihiisi oo dhan jaboutu ku shubtay oo loogu ilaaliya,
Shacabkan gaajada iyo duruuftu hayso ee u baahan hiil ilaahayba taakuleyn laga helaaye ma la odhan kara jaboutida xabaal ku si ridaysaa wax u so wada ?
By: Mohamed azam tahir
This entry was posted on May 25, 2009 at 12:11 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.